Highlanders beat Dynamos again in a Premier Soccer League match at Barbourfields Stadium on Sunday. (Photo: PSL)
Dynamos, iyo iri pamusoro peMadamburo neKugona Kunenge Kudada nemapoinzi matatu, yakananga kuNyamhunga Stadium kunosangana ne ZPC Kariba iyo inorairidzwa naSunday Chidzambwa uyo aimbove kaputeni pamwe nemurairidzi wavo.
Chidzambwa ari kuda kuripa vanoisa mari muchikwata cheZPC Kariba avo vakaratidza chivimbo chavo maari nekumupamhidzira mamwe makore maviri ari pabasa semurairidzi wechikwata chekuMashonaland West ichi.
Mumwe muteveri wenhabvu, VaTanaka Mushayavanhu, vanoti Dembare inofanira kungwarira rwendo rweku Kariba urwu sezvo Chidzambwa asingadyike zvekutamba.
Masvondo mashoma apfuura ZPC Kariba yanga ichitatarika zvekuti yawira pasi kusvika pachinhanho chechinomwe asi zvikwata zvese munyika zvinowanzomuka chibhebhenenga apo zvinosangana neDembare.
Asi murairidzi weDynamos, Lloyd Mutasa, haasi kutarisira kuti chikwata chake chingadonhedze mapoinzi panguva ino zvekuti ari kuda kuti chitima cheDembare chirambe chiri munzira yekutora mukombe wakakosha uyu.
Asi Mutasa anofanira kugadzirisa matambiro echikwata chake icho chiri kunyanyotarisira kukandirwa zvibodzwa nevatambi vaviri chete Ocean Mushure naChristian Epoupa, ivo vakanyoresa vatambi makumi matatu nevePremier Soccer League.
Dembare irikutarisirawo zvekare kuti Ngezi Platinum Stars ichawisirwa pasi apo Madamburo akananga kuBarbourfiels Stadium kunosangana neBulawayo City.
Asi chikwata chaTonderayi Ndiraya ichi chinowanzodzoka nemufaro pese pachinoshanya kuBulawayo zvekuti Ndiraya ari kutarisira kunotora mapoinzi ese matatu.
Asi mutambo mukuru svondo rino uchange uri kuBarbourfields Stadium neSvondo umo Highlanders iri kuda kudimbura muswe weFC Platinum.
Pamwedzi miviri yapfuura Bosso yakunda mumutambo mumwechete chete asi kubudirira uku kwakauya zvine mutsindo apo vakazvambura Chicken Inn
4-0 apo mitambo yePSL yakapedzisira kutambwa.
How Mine v Hwange - Luveve
Harare City v Bantu Rovers - Rufaro
Tsholotsho v Chapungu - Dulivadzimu
Yadah v Black Rhinos - Rufaro
Makundano eEnglish Premier League adzokawo zvekare mushure mesvondo rekupa nguva kumakwikwi e2018 World Cup nemutambo mukuru kuAnfield pakati pemaReds eLiverpool nema Red Devils eManchester United.
Zvikwata izvi zvinoteverwa nechaunga muZimbabwe zvekuti mudzimba dzekubheja mitambo muchange makazara kuti tashu vakawanda vachitsvaga mari nekudoma kuti chikwata chavanofunga kuti chichakunda ndechipi.
Pari zvino, Liverpool iri kutatarika iri pachinhanho chechinomwe nemapoinzi gumi nemaviri kubva mumitambo minomwe panguva iyo maRed Devils akabatana pamusoro petafura nevavakidzani vavo veMan City nemapoinzi gumi nemapfumbamwe.
Asi Man City ine mutambo munyoro nyoro apo iri pamusha muEtihad Stadium neStoke City mumutambo uyo varikutarisirwa kutora mapoinzi ese matatu nekuramba vari panyanga.